Jeffoptics anjara tamin'ny China Glass 2017
Post fotoana: Jun-16-2017
China Glass 2017 nitranga tao amin'ny China International Center Exhibition avy amin'ny 24 May ny 27 Mey 2017 tao Beijing Shina. Beijing Jeffoptics Company Limited teo manolotra ny vokatra eo amin'ny hijoro ny Shinoa Distributor - China Building Material Certification Group Test & Co., LT ...Lire la suite »
Jeffoptics anjara tamin'ny Eurasia Glass 2017
Eurasia Glass Fair 2017 dia natao avy amin'ny 8 Martsa ny 11 Martsa 2017, tao Tüyap Fair, Fivoriambe sy Kaongresy Center, Istanbul, Torkia. Jeffoptics toy ny exhibitor, nampiseho telo ny fanjakana-avy-the-kanto fitaovana ho an'ny adin-tsaina ambonin'ny fandrefesana ny mafana fitaratra mora tezitra sy mora tezitra simika fitaratra amin'ny ...Lire la suite »
Jeffoptics dia mandray anjara ao amin'ny Düsseldorf Glasstec 2016
Glasstec2016 dia natao hatramin'ny 20 Septambra ny 23 Septambra 2016, tao messe Düsseldorf, Alemaina. Ny Glasstec no lehibe indrindra iraisam-pirenena ara-drariny ho an'ny famokarana sy ny fanodinana fitaratra orinasa. Jeffoptics nampiseho ny F-1 Series, JF-2 Series sy JF-3 Series fitaratra metatra ambonin'ny adin-tsaina tao amin'ny fampirantiana ...Lire la suite »
Jeffoptics anjara tamin'ny Glasstech Asia 2016
Beijing Jeffoptics Company Limited nandray anjara tamin'ny Glasstech Asia 2016-14th International Glass Products, Glass Manufacturing, Processing & Fitaovana Exhibition Novambra 24-26, 2016, natao tao Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), Ho Chi Minh City Vietnam. Jeffoptics nampiseho ...Lire la suite »
Jeffoptics anjara tamin'ny Zak Glass Teknolojia 2016
Beijing Jeffoptics Company Limited nandray anjara inZAKGlass Teknolojia Expo 2016 9-11 natao tamin'ny Desambra, 2016, in Pragati Maidan, New Delhi, India. Jeffoptics nampiseho ny F-1 Series, JF-2 Series sy JF-3 Series fitaratra ambonin'ny metatra ny adin-tsaina ao amin'ny fampirantiana. JF-1 Series sy JF3 Series dia ho an'ny therm ...Lire la suite »
Nandray anjara Jeffoptics inVitrum2015 Italia
Vitrum 2015 dia natao tamin'ny Oktobra 6 Oktobra 9, 2015 Vitrum dia fitaratra fampirantiana izay natao tao Milano, Italia isaky ny roa taona, ary manintona ara-barotra ny olona avy amin'izao tontolo izao ary dia ny tsy maintsy-Manatrika hetsika izay italiana glassmaking fomban-drazana dia miaraka amin'ny fanolorana ny fanapahana-e ...Lire la suite »